တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နေရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်တု မရှိတော့ ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲ – Nyang Media
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နေရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်တု မရှိတော့ ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲ
နိုဝင်ဘာ 09, 2019
ပြည်မအစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒက ဆင်ခြင်တုံတရား
နည်းပါးတဲ့ပုံရိပ် ပေါ်လာတယ် . . .
အစိုးရအဖွဲ့မပြောနဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီမှာတောင် Ethic
ဆိုတာ ထိန်းသိမ်းရတယ် . . .
ကရင်နီလူငယ်တွေပြောတာ မမှားဘူးဗျ။ နိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရဆိုရင် သူတို့မှန်တယ် . . .
တိုင်းရင်းသားတွေက ဒီ (ဗိုလ်ချုပ်) ပုံရိပ်ကို မလိုချင်ဘူး။
တကယ်လိုချင်တာက နိုင်ငံရေးအနှစ်သာရကို လိုချင် တာ . . .
ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ် စိုက် ထူသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကယားပြည်နယ်အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးတစ်ဦးကို ကြေညာချက်ထုတ် ဝေဖန်ခဲ့သည့် ကရင်နီလူငယ် (၆) ဦးကို ပြည်နယ်အစိုးရက နိုင်လွတ် လုံ ပုဒ်မ (၁၀) ဖြင့် တရားစွဲကာ လွိုင်ကော်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် (၆) လ ချမှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားအမြင်များကို ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်။
နိုဝင်ဘာ (၈)၊ ၂၀၁၉၊ ရန်ကုန်
ဒေါက်တာ M ကောန်လ
ဒီကိစ္စက နှစ်ပိုင်းပြောရမယ်။ တစ်ပိုင်းက ဒီဟာသည် အစိုးရရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားအပေါ်မူတည်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ ကရင်နီလူငယ် (၆) ယောက်ကို နိုင်လွတ်လုံ ပုဒ်မ (၁၀) နဲ့ ညိတယ်ဆိုပြီး အခုလိုစွဲပိုင်ခွင့်နဲ့ စွဲတယ်ပေါ့။ ဥပဒေကြောင်းအရ နိုင်လွတ်လုံ ပုဒ်မ (၁၀) နဲ့ ညိစွန်းတာ မှန်တယ်ပေါ့။ ပြစ်ဒဏ်ချတာလည်း သူ့ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ သွားတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ စဉ်းစားရမယ့်အချက်က အဓိကအခြေခံအကြောင်းတရားကို စဉ်းစားရမယ်။ အဲဒီတော့ အစိုးရက နေရာတကာ ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်တာထက်စာရင် ကျနော်တို့က ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ သွားမယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ တဖက်တလမ်းကသွားနေတယ်လေ၊ နောက်တစ်ခါ NLD အစိုးရအနေနဲ့ ကတိပေးတာတွေ၊ ပြည်ပနိုင်ငံရေးအုပ်စုတွေရဲ့ Dialogue တွေမှာ ပြောနေတာတွေအရဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားအရ စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုအရေးယူအပြစ်ပေးခြင်းဟာ အမည်းစက် (Black Mark) ဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျနော်တို့သုံးသပ်ချက်အရ ကရင်နီလူငယ်တွေပြောတာ မမှားဘူးဗျ။ နိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရဆိုရင် သူတို့မှန်တယ်။ ဘာလို့လည်းဆို ကတိပျက်လို့ သူတို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့မှ ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာ။ ဒီကိစ္စကို ညှိနှိုင်းလာတဲ့ မူလအစကတည်းက ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က နောက်ဆုံး ‘သဘောတူပါ့မယ်၊ ဒီဟာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးပါ့မယ်’ ဆိုပြီး ဒီကတိခံတယ်။ ကတိခံပြီးမှ နောက်တစ်ခါကျ နောက်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်မြင်တာကတော့ ကတိကဝတ်ပျက်တဲ့အပေါ်မှာ ဒါ Ethically ပေါ့။ အစိုးရအဖွဲ့မပြောနဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီမှာတောင် Ethic ဆိုတာ ထိန်းသိမ်းရတယ်။ ဒါက ဥပဒေစည်းမျဉ်းထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ကျနော်တို့မြင်တယ်။ ဒီ Ethic ကို ချိုးဖောက်လိုက်တော့ နိုင်ငံရေးအရဆိုရင်လည်း ဒါဟာ ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေလိုချင်တဲ့ဟာက ဒီလိုအတင်းအဓမ္မ တည်ဆောက်တဲ့ဟာကို လိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒီပုံရိပ်ကို မလိုချင်ဘူး။ တကယ်လိုချင်တာက နိုင်ငံရေးအနှစ်သာရကို လိုချင်တာ။ အဲဒီမှာ လွဲနေတာ။ လွဲတာကို ဥပဒေအရညိစွန်းတယ်ဆိုပြီးတော့၊ အားလုံးခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ သွားရမယ့်ကိစ္စကို မသွားဘဲ ဥပဒေအရဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျတော့ ပိုပြီးဆိုးသွားတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဒီ ကရင်နီလူငယ် (၆) ဦးကိစ္စတင်မဟုတ်တော့ဘူး။ တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်သလို ဖြစ်သွားပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြည်မအစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒက ဆင်ခြင်တုံတရားနည်းပါးတဲ့ပုံရိပ် ပေါ်လာတယ်ပေါ့။ အဲဒါက အကြီးကြီးပဲ။ ဒါကိုတော့ ကျနော်တို့လည်း လက်မခံဘူး။ ဆင်ခြင်တုံတရား နည်းလွန်းအားကြီးတယ်လို့ပဲ ကျနော်ပြောချင်တယ်။
ဒီလူငယ်တွေက တကယ်တမ်းကျတော့ သူတို့မှာ သိပ်ပြီးတော့ အပြစ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ရှိတယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ ဒီလူငယ်တွေကို အခုလိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာကတော့ မသင့်တော်ဘူး။ နောက် ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်က ဒေသခံတွေ သဘောမတူဘူးဆိုရင် လုပ်ဖို့မသင့်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကို သွားပြီးထားဖို့ မသင့်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကယားပြည်နယ်မှာ သူ့ရဲ့သမိုင်းက တခြားပြည်နယ်နဲ့မတူဘူး။ ကျနော်တို့ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အထိ သူကလွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုပဲဗျ။ ကယားက တကယ်တမ်း သမိုင်းကြောင်းအရ သူကလွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်လေးတစ်ခုပဲ။ အဲဒီလို သူ့မှာသမိုင်းကြောင်းရှိတယ်။ အဲဒါကို အတင်းအကျပ်လုပ်ဖို့ မသင့်ဘူး။ နောက် ပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အထဲမှာ တကယ်တမ်းကျ ကယားတွေလည်းမပါဘူးလေ။ အဲဒီတော့ တကယ်ဆို ဒေသခံပြည်သူရဲ့ သဘောထားကိုယူပြီးမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကို လုပ်သင့် မလုပ်သင့် စဉ်းစားရမှာပေါ့။ အခုဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်လာတော့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်မယ်တို့၊ တိုင်းရင်းသားရင်ကြားစေ့ရေးတို့ စတဲ့ကိစ္စတွေအတွက် အများကြီး သံသယဖြစ်စရာ ရှိလာတာပေါ့။ သူတို့က ပြောသာပြောတာလေ။ ပြောတဲ့စကားနဲ့ လက်တွေ့က ကွာခြားတယ်လေ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်မှု ရှိလာနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်လိုချင်တယ်၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုလိုချင်တယ်။ အစိုးရကလည်း ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားမယ်ပြောထားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လုပ်ဆောင်ချက်က အဲဒီလိုပုံစံမျိုး မမြင်ဘူး။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေ။
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နေရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်တု မရှိတော့ ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲ။ ဒါပေမယ့် ကယားမှာ အခုဖြစ်တာက အခုထားတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘဲ တခြားနေရာမှာဆို သူတို့ကမပြောဘူး။ အခုလုပ်တဲ့နေရာက အချက်အခြာကျတဲ့နေရာမျိုးဆိုလား။ နောက် ကျနော်ကြားတာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ဒီပင်လုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကယားက၊ ကရင်နီက သဘောထားတွေ ဘာမှမပါဘူးဆိုတဲ့ဟာပေါ့။ ဒီပင်လုံစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့။ ကရင်နီပြည်ကလူတွေက အဲဒီလိုခံစားကြတယ်။ လူငယ်တွေအပါအဝင်ပေါ့။ ဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုကို အဲဒီမှာသွားထားတာ သူတို့ကသိပ်မကြိုက်ဘူး။ နောက်တစ်ခုက ကျနော်တို့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးပဲဆိုကြပါစို့။ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ တိုင်းရင်းသားနဲ့ အစိုးရနဲ့ ပေါ့ဗျာ။ ဆိုတော့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုဟာလေးလောက်နဲ့ ထောင် (၆) လ ချတာကတော့မသင့်မြတ်ဘူး လို့ ကျနော်ပြောချင်တယ်။ တိုင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော တိုင်းရင်းသားပါတီက တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ ကျနော့်အမြင်ကိုပြောရရင် ဒီကိစ္စက မဖြစ်သင့်ဘူး၊ မသင့်မြတ်ဘူးလို့ ပြောချင်တယ်။ ဒီကိစ္စမှာ အမှန်က ဘာကိုမှအရေးမယူသင့်ဘူးလို့ ကျနော်ပြောချင်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တု မလုပ်ရလို့ ဘာဖြစ်သွားမလဲဗျ။ နောက်ပြီး သူတို့ကို ဒီလိုပြောရုံနဲ့ ထောင်ချလိုက်တယ်ဆိုတာက နည်းနည်းလွဲချော်နေတယ်။ သွားတဲ့လမ်းကြောင်းက လွဲချော်နေတယ်။
တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတို့၊ နောက် ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး (reconciliation) လုပ်ငန်းတွေ ခဏထားဦးပေါ့၊ အရင်ဆုံး ကျမတို့ပြောရမှာက ဒီ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပေါ့နော်။ တစ်စု တစ်ယောက်သည် လက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့ အာဏာပိုင်တွေအပေါ်မှာ သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကို သူတို့ရေးသားထုတ်ဖော်တဲ့အခါ၊ ပြောဆိုတဲ့အခါ အဲဒီအပေါ်မှာတောင်မှ နားလည်ပေးနိုင်မှု၊ ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့ ဥပဒေသုံးပြီးတော့ ထောင်ထဲထည့်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါက ဒီမိုကရေစီရဲ့ အခြေခံစံနှုန်းဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို အစိုးရကိုယ်တိုင်က ဖိနှိပ်တဲ့ဖြစ်ရပ်ပေါ့။ ကျမကတော့ ဒီလိုပဲသုံးသပ်ချင်တယ်။ တခြားသော နားလည်ပေးရမယ့်၊ နားလည်မှုရှိရမယ့် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကိစ္စတွေ ဒါတွေက ပိုပြီးနက်နဲတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ထင်ထင်ရှားရှား အခြေခံနားလည်လို့ရတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးလို့ပြောလို့ရတဲ့ ဒီ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုမှာတောင်မှ သည်းခံနိုင်မှု (tolerance) မရှိတာဟာ စိုးရိမ်စရာပေါ့လေ။
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်က ခုအချိန်အခါမှာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးလုပ်နေတယ်။ တစယောက်နဲ့တစ်ယောက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ခင်အောင်လုပ်နေတဲ့ ကာလမှာ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးကို မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ အချင်းချင်းညီညွှတ်ကြဖို့၊ သဘောထားတွေပြည့်ဝဖို့၊ သည်းခံကြဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ကာလမှာ အခုလို အဖြစ်မျိုးက မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ကျနော်မြင်တယ်။ အရေးယူမယ်ဆိုရင်လည်း သက်သက်ညှာညှာပဲ ဖြစ်သင့်တာပေါ့ဗျာ။
ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာလေ ညစ်ပတ်မှုတွေ ပိုများလာလေပေါ့ဗျာ